Usavimba mazwi, vimba nezviito. - Asingazivikanwe - Anodudzira Pedia
Mashoko anowa pasina chinhu. Tinogona kugara ndokufunga pamusoro pezvinhu zvakasiyana zvatinoda kuita. Kunyange zvichikosha kuronga, asi zvakatonyanya kukosha kuti iwe uzviite. Tikasaita, zvino aya anova mazwi asina zvaanoreva. Vanhu havazovimba nemunhu asingaite zvaanotaura.
Ukaita zvaunotenda mazviri, zvine zvazvinoita, uye zvinobatsira hupenyu hwevamwe. Izvi zvinoita kuti vanhu vatirangarira, uye tinowana ruremekedzo pakudzoka. Naizvozvo, oneka zviito zvako zvakanyanya sezvaunonyanya kufunga pakuronga.
Kana iwe ukaona kuti mumwe munhu anovimbisa zvakawanda, gara uchiteedzera zviito zvavo. Ichakuudza nezvehunhu hwavo. Zviri nyore kunzwisisa kuti munhu ari sei zvichienderana nezvavanoita. Usavimbe nevanokundikana kuisa mazwi avo kuzviita.
Kana mumwe akaita, anofanira kuita zvawo kuti azviite. Hongu, ichokwadi kuti hazvisi zvese zvipikirwa zvinogona kuchengetwa nekuda kwemamiriro asina chokwadi, asi iko kuedza kunoratidza uye kuverenga.
Ukangoputsa kuvimba kwemumwe munhu, zvinoita sekutombozvidzora. Kuteerera kuvimba kune kwakaomawo zvakaenzana. Naizvozvo, iva akatendeka kumashoko ako uye utendeudzire kune zviito zvine simba. Izvi zvinobatsira vanhu kuvimba newe uye kuvaka hukama hwakasimba.
Naizvozvo, chenjera kwazvo nemaitiro aunoita nekuvimba. Ziva uyo waunofanira kuvimba naye uye maitiro ekuchengeta kuvimba kwemumwe munhu zvakare. Inobatsira iwe kuwana rukudzo uye kuzvimisa pachako uve munhu akavimbika wenyama.
Kukurudzira Mashoko eUchenjeri
Kuda Uye Kuvimba Quotes
Quotes About Mazwi
Quotes Pamusoro Pemazwi Uye Zviito
Mashoko Mapfupi Euchenjeri
Kuvimba Quotes Mifananidzo
Mazwi Akachenjera Euchenjeri
Mazwi Euchenjeri Quotes
Mazwi Euchenjeri Kutaura
Paunowana pasina mhinduro kuchinetso, pamwe harisi dambudziko rinofanira kugadziriswa, asi pachokwadi ichazogamuchirwa. - Asingazivikanwe
Kana iwe ukawana pasina mhinduro kuchinetso, pamwe harisi dambudziko rinofanira kugadziriswa, asi asi…
Kunyemwerera kumwe kunogona kutanga hushamwari. Izwi rimwe chete rinogona kupedza kurwa. Kutarisa kumwe chete kunogona kuchengetedza hukama. Munhu mumwe chete anogona kushandura hupenyu hwako. - Asingazivikanwe
Kunyemwerera kumwe kunogona kutanga hushamwari. Hatina kusaina chero chisungo tichitanga hushamwari. Izvo chete…
Rega kunetseka, zvinowedzera kunetseka. - Asingazivikanwe
Rangarira kuti kunetsekana uye kufungisisa hazvingogadziri chete pfungwa yekushushikana nekushushikana asiwo zvinotungamira ...
Rega kunyemwerera kwako kuchinje nyika, asi usarega nyika ichichinja kunyemwerera kwako. - Asingazivikanwe
Zvakakosha kuyeuka chokwadi chekuti kunyemwerera kwechokwadi uye kwechokwadi kwakakosha, uye isu…